Xidhiidhka kubadda Cagta Ee Yurub oo go'aan kasoo saaray Final ka champion league ga. - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Xidhiidhka kubadda Cagta Ee Yurub oo go’aan kasoo saaray Final ka champion league ga.
On May 30, 2020 2,495
Addis Ababa, MAY 30, 2020 (FBC/SOMALI)-Xidhiidhka kubadda cagta ee qaaradda yurub (UEFA) ayaa soo saaray ,warbixin ku saabsan In Ciyaarta kama dambaysta ah Horyaalka champion league ga laga bedeli doono in lagu
qabto dalka Turkeyga, sababo la xidhiidha Walaaca laga qabo xanuunka saf-mareenka ah ee Covid-19.
Xidhiidhka kubada cagta ee Yurub ,ayaa taa bedelkeeda wada qorsheyaal kale oo lagu doonayo in lagu dhammaystiro Tartarka Horyaalka champion league ga ,iyada oo hadda la qorshaynayo in garoomo kale lagu dhammaystiro tartanka.
Xaaladda Kasoo kababshada weyn ee xanuunka faafaha daran,ayaa u saamaxaysa murashaxa ugu cad-cad in uu noqdo dalka portiqiiska, islamarkaana lagu qabto caasimadiisa Lisbon ,oo lagu soo gebagebeeyo Tartanka champion league ga.